दसैँमा स्वादिष्ट बनाउनुहोस् अष्ट्रिचको ‘ग्रेभी’ :: Setopati
दसैँमा स्वादिष्ट बनाउनुहोस् अष्ट्रिचको ‘ग्रेभी’
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं,असोज ३०
कोलेष्ट्रोल, ट्राइग्लिस्राइड भएका बिरामीलाई चिकित्सकहरुले रातो मासु नखान सल्लाह दिन्छन्। त्यस्ता बिरामीका लागि खसीबोका तथा च्याङ्ग्राको मासु घातक हुन्छ।
तर, धेरै मानिसहरुलाई रातोमासुको स्वाद नलिएसम्म मासु खाए जस्तो अनुभव नै हुँदैन। त्यसैले चिकित्सकहरुले नखान सल्लाह दिँदादिँदै पनि कतिपयले अनियन्त्रित रुपमा रातो मासु खाइदिन्छन्। जसकारण कोलेष्ट्रोल, ट्राइग्लिस्राइड र यूरिक एसिड बढ्न गई ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्छ।
त्यसकारण रातो मासुको सामान्य बिकल्प बनेको छ अष्ट्रिच मासु। नेपालमा पनि यसको व्यवसायिक उत्पादन सुरु भइसकेको छ। यदि तपाई पनि अष्ट्रिचको मासु खाने सोच्नुभएको छ भने यसका परिकारहरु कसरी बनाउने? यसबाट विभिन्न परिकार बनाउन सकिन्छ।
यसमध्ये गे्रभी बनाउने तरिका सिकाउँदैछौँ।
अष्ट्रिच ग्रेभी बनाउन चाहिने सामग्रीहरू :
टुक्रा पारिएको अष्ट्रिच मासु,सुर्यमुखीको तेल,प्याज,गरम मसला,अदुवा लसुनको पेष्ट,गोलभेडा,बेसार, नुन,करीपाउडर,जिराको धुलो, हरियो धनियाँ।
‘प्यान’ वा कराईमा ठीक्क मात्रामा तेल राखेर तताउने। टुक्रा पारेको प्याजलाई हल्का खैरो हुन्जेलसम्म तेलमा तताएपछि मासु राख्नुहोस्।
प्याज र मासुलाई राम्ररी चलाएर मासुको परिमाण अनुसार ५ मिनेटसम्म भुट्नुहोस्। त्यसमा अदुवा र लसुनको पेष्टलाई राखेर थप २ मिनेट पकाउने। त्यसपछि बेसार,करी पाउडर,जिरा र खुर्सानीको धुलो राख्ने। त्यसलगत्तै पिस बनाएको गोलभेडा पनि राख्नुहोस्।
आवश्यकता अनुसार तातो पानी, स्वादअनुसारको नुन राखेर उमालेपछि प्रेसर कुकरमा राखी २÷४ सिठ्ठी लागाउनुहोस्। यसपछि अष्ट्रिच ‘ग्रेभी’ तयार हुन्छ। त्यसमा हरियो धनिया राखेर स्वाद अझै बढाउन पनि सकिन्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ३०, २०७५, ०३:१६:००
के ग्यास लिक हुँदैमा सिलिन्डर पड्किन्छ ?
जाडोमा कस्तो हिटर किन्ने? कुनको कति पर्छ? (भिडिओ)
यो तिहारमा यसरी बनाउनुस् हाम्रा मौलिक रैथाने खानेकुरा (विधिसहित)
यसरी बनाउनुस् मिठो अनरसा (विधिसहित)
भरपुर भिटामिन-सी भएको २३ सय वर्ष पुरानो फल बिमिरो
यसरी बनाउनुस् स्वादिलो मटर-पनीर